काश्मिरमा बस खस्दा १३ को मृत्यु - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : आइतबार, मङि्सर २३, २०७५१२:५५ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
A Philtranco bus lies beside the highway after colliding withatrailer truck in the town of Carmen, Agusan del Norte on August 19, 2011. Four persons from the bus including its driver were treated for injuries inanearby hospital. MindaNews photo by Erwin Mascarinas
भारत २२ मङ्सिर (रासस/एएफपी) : भारत प्रशासीत काश्मिरमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा शनिबार १३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बाटोबाट झण्डै ७० मिटर तल खसेर बस दुर्घटना भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । दुर्घटनामा परेको बसमा २६ जना यात्रु रहेका थिए ।
पहाडी क्षेत्रमा पर्ने पुन्च भन्ने ठाउँमा साघुँरो बाटो र अफ्टयारो घुम्तीका कारण दुर्घटना भएको बताइएको छ । घटनास्थल श्रीनगरदेखि २०० किलोमिटर टाढा पर्ने वरिष्ठ प्रहरी निरीक्षक राजिव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
“घटनामा परी १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने अरु घाइते भएका छन्,” पाण्डेले एएफपीसँग भन्नुभयो । उहाँले घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो । घाइतेहरुलाई विमानबाट जम्मुमा रहेको अस्पताल लगेर उपचार गराइएको छ ।
चालकको लापर्वाही, साँधुरो र खराब अवस्थाको सडक लगायतका कारणले भारतमा धेरै यस्ता दुर्घटना हुने गरेका छन् । भारत विश्वमै धेरै सडक दुर्घटना हुने देशमा पर्दछ ।
एक तथ्याङ्कअनुसार भारतमा हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा परी औसतमा एक लाख ५० हजार जनाको मृत्यु हुनेगरेको छ ।
ट्रम्पलाई फ्लोरिडामा महत्वपूर्ण सफलता, मतगणना रोक्न सर्वोच्च अदालत जान सक्छुः ट्रम्प
दक्षिण भारतमा बस दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु !